OpenXR nguva yekumhanya "Monado" inopfuura kuenzanisa kwekuyedza | Linux Vakapindwa muropa
Ichi chi chiitiko chakakura cheMonado OpenXR nguva yekumhanya, inozivikanwa yakavhurwa sosi projekiti uye yekutanga nguva yekumhanya yerudzi rwayo yeGNU / Linux. Chikonzero cheichi chiitiko chakakosha ndechekuti ikozvino, nekuda kwekuedza kwaCollabora, zvakaziviswa kuti yakapasa bvunzo dzekuteerera.
Munguva pfupi yapfuura Collabora inoshanda zvakanyanya mune yakavhurika sosi yepasirese, iine makuru mapurojekiti senge iwo aunayo mumaoko ako pamwe nekubatana neValve mainjiniya ezvinhu zvakaita seSteam Linux Runtime Container, pamwe chete nezvavari kuita zvakare muLinux kernel yenyaya yese yekutsigira, zvekuisanganisira Monado.
Rangarira kuti OpenXR ndiyo yakavhurika chiyero cheAugmented Reality (AR), yeVirtual Reality (VR), uye Mixed Reality (RM) pamwe chete inozivikanwa seXR (eXtended Reality).
Sezvakataurwa kubva kuCollabora, Monado ndiyo yekutanga OpenXR yekumhanyisa nguva ye GNU / Linux, uye chinangwa chayo ndechekushandisa yakavhurwa sosi XR ecosystem kuti ipe mabhuroko ekuvakisa anogona kugadzirirwa nevamwe vagadziri vezvigadzirwa kutsigira mapuratifomu eGNU / Linux.
Nezvo zvataurwa, nhau ndedzekuti Monado izvozvi zvinoenderana neyakaedzwa suite yakapihwa na Khronos Boka reOpenGL uye Vulkan. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu, nekuti haisi yepamutemo kuitisa sezvo isina kupfuudza iyo yakazara maitiro. Icho chikonzero ndechekuti ivo parizvino vari kuyedza mukati kusvika yagadzirira zvizere.
Parizvino ivo vakawedzerawo rutsigiro rweApple.
Kana iwe uchida XR, Monado ichave yakakosha zvakanyanya kana iwe uchida kushandisa gadget kubva mundima ino pane yako Linux distro. Uye zvakare, iko kukurumidza kuita kweiyo Khronos Boka kunoita kuti OpenXR iwanikwe munguva pfupi iwe vagadziri vazhinji iva nayo nenguva uye wedzera rutsigiro kubva pakutanga zviri pamutemo.
Panguva ino, Valve uye yayo SteamVR Ivo vari kutsigira chirongwa ichi, uye ndizvo zvakaitawo Microsoft neFacebook (Oculus). Iyo yese yakawedzerwa chokwadi indasitiri inoita kunge yakazvipira kwazviri, saka chirongwa ichi chinotaridzika zvakanaka kwazvo kune ramangwana riri pedyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » OpenXR nguva yekumhanya "Monado" inopasa bvunzo dzekuteerera
Mudzidzi anoshuma zvakavanzika nyaya musoftware. Vanokupomera mhosva yekutyora kodzero